Kuboshwe owesifazane nendodana yakhe | News24
Kuboshwe owesifazane nendodana yakhe
Amaphoyisa aseNdwedwe abophe abasolwa ababili abatholakala namasaka ensangu angu-33 endaweni yase Umona ngeledlule. x
AMAPHOYISA aseNdwedwe abophe abasolwa ababili ngoLwesine oledlule, ngomhlaka 18 kuNcwaba (August) 2016, abatholakale nezidakamizwa ezingekho emthethweni endaweni yase Umona.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Lieutenant Colonel Thulani Zwane uthe abasolwa, okungowesifazane oneminyaka engu-51 nendodana yakhe eneminyaka engu-22, baboshwe ngabo-6 ekuseni emva kokuthi amaphoyisa abathole nensangu.
Abasolwa bavele enkantolo yeMantshi yaseNdwedwe ngoLwesihlanu oledlule.
UMnuz Zwane uthe: “Amaphoyisa abesebenzela endaweni yase Umona, eNdwedwe, ngenkathi belandela umkhondo ngezidakamizwa ezitholakale kuyona le ndawo. Amaphoyisa athole amasaka angu-33 ensangu,” kusho yena.